ISerene Bungalow eLandgraaf eneTerrace kunye neNature Garden
Yonwabela iholide egcwele ubunewunewu kule bungalow ipholileyo. Le ndlu ikwindawo yokuhlala ezolileyo kunye nomgama omfutshane ukusuka kwiindawo ezintle zogcino zendalo ezifana neBrunsummerheide. Ilungele iiholide kunye neqabane lakho kwaye mhlawumbi umntwana.
Ubuhle uhamba ngeSchinveldse Bossen, ukhwele ibhayisekile kwiBrunsummerheide kwaye uthenge kwiMaastricht epholileyo okanye eRoermond, yonke into inokwenzeka, ngenxa yendawo emnandi yale ndawo yokuhlala. Unokwenza ukuthenga kwakho kwivenkile enkulu kumgama wokuhamba kwaye iindawo zokutyela ezahlukeneyo kwindawo ekufutshane zibonelela ngamava abalaseleyo okupheka. Izixeko ezifana ne-Aachen, i-Heerlen kunye ne-Sittard inokufikelelwa ngaphakathi kwemizuzu ye-30 kunye nokutyelela kwi-GaiaZoo e-Kerkrade, i-Snowworld kunye ne-Mondo Verde e-Landgraaf kunye ne-Wildpark Gangelt e-Gangelt yegama elifanayo lifanelekile ukutyelela.
Ikhitshi elixhotyiswe kakuhle likunika ithuba lokulungiselela isidlo osithandayo kwaye i-terrace yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kunye ne-snack kunye nesiselo osithandayo.
Uyilo: Umgangatho ophantsi: (Igumbi lokuhlala (iTV, indawo yokuhlala), igumbi lokutyela (itafile yokutyela), Ikhitshi (iketile yombane, umatshini wekofu, i-oveni, i-microwave, ifriji-ifriji), igumbi lokulala (ibhedi ephindwe kabini), igumbi lokuhlambela (ibhafu yokuhlambela, ishawa, isitya sokuhlambela), indlu yangasese, iholo)
ithala, igadi, indawo yokupaka (kawonke wonke)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Landgraaf